Dawladda Qatar oo balaarinaysa salhdiga Militeri ee Maraykanku ku leeyahay dalkeeda. – Bosaso Times News
admin January 30, 2018 Dawladda Qatar oo balaarinaysa salhdiga Militeri ee Maraykanku ku leeyahay dalkeeda.2018-01-30T07:50:28+00:00 Puntland, somali News No Comment
Madaxa ciidamada dalka Qatar Gen. Khalid Bin Mohamed Attiyah oo booqasho ku tegay magaalada Washinton ee caasimada Maraykanka ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay inay balaariyaan saldhiga ciidan ee Marykanku ku leeyahay dalkiisa.
Dawladda Qatar ayaa sheegtay inay balaarinayso saldhiga ciidan ee Maraykanka si markaas ciidamo dheeri ah iyo qoysaskoodu u degi karaan saldhiga. Ciidanka Maraykanku waxay soo degeen saldhigaas 2003 markii ay ka soo guureen saldhigii ay ku lahaayeen dalka Sacuudiga
Dawladda Maraykanka ayaa saldhig ciidan ku leh meesha loo yaqaan Al-Udeyd ee dalka Qatar kaas oo ah kan ugu balaaran ee ku yaal bariga dhexe. Ciidamada Maraykanka ayaa u isticmaala saldhiga Qatar ee Al-Udeyd inay ka duulaan diyaaradahooda dagaalka ee falalka ka fuliya Ciraaq iyo Afqaanistaan iyo meela kaleba. Waxaa saldhiga hada ka jooga Maraykanka in kabadan 10 kun oo askari iyo qalabkooda oo nooc kasta leh
Tan iyo markii uu xumaaday xiriirka wadamada Khaliijka, cuna qabataytana lagu soo rogey dalka Qatar bartamihii sanadkii tegay 2017 ayaa dawlada Qatar waxay bilowday inay xoojiso xiriirka ay la leedahay saaxibadeeda kale sida Turkiga, Iran iyo Maraykanka taas oo ay ku doonayso inay kaga badbaado isku day weerar kaga yimaada dhinaca Sacuudiga iyo xulafadiisa.
http://www.bosasotimes.com/dawladda-qatar-oo-balaarinaysa-salhdiga-militeri-ee-maraykanku-ku-leeyahay-dalkeeda/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2018/01/qatarus3.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2018/01/qatarus3-150x150.jpg 2018-01-30T07:50:28+00:00 adminPuntlandsomali NewsQatar,Saudi Arabia,SC,US MiliteryMadaxa ciidamada dalka Qatar Gen. Khalid Bin Mohamed Attiyah oo booqasho ku tegay magaalada Washinton ee caasimada Maraykanka ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay inay balaariyaan saldhiga ciidan ee Marykanku ku leeyahay dalkiisa. Dawladda Qatar ayaa sheegtay inay balaarinayso saldhiga ciidan ee Maraykanka si markaas ciidamo dheeri ah...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Qatar, Saudi Arabia, SC, US Militery
« Dad ka badan 100 oo ku dhintay qarax magaalada Kabul ee dalka Afqanistaan
Garoowe Maxaa ka dhacay Maalintii Talaadada »